ဘလော့ မှတ်စု: စွန့်ခြင်းနှင့် နှောင်ဖွဲ့ခြင်း
တစ်ခါတုန်းက ဗာရာဏသီ ပြည်မှာ ဘုရင် တစ်ပါးဟာ တရား အားထုတ်ရင်း ပထမဈာန်ကို ရထားပါတယ်။ တစ်နေ့တော့ သူဟာ “ရဟန်းတရားက မြတ်သလား၊ မင်းအဖြစ်ကပဲ မြတ်သလား”လို့ ဆင်ခြင် မိပါတယ်။ သေချာ ဆင်ခြင်တော့ “မင်းအဖြစ် ထက် ရဟန်း တရားက မြတ်တယ်” ဆိုတာ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် တိုင်းပြည် အုပ်ချုပ်ရေးကို အမတ်တွေနဲ့ လွှဲထားပြီး တရားကိုပဲ အားထုတ် နေပါတယ်။ အမတ်တွေ ကိုလည်း တရားနဲ့ အညီစီရင်ဖို့ တခါတည်း မိန့်မှာ ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမတ်တွေက လာဘ်ပေး လာဘ်ယူမှု. တွေလုပ်ပြီး တရား စီရင် နေကြပါတယ်။ အမှုဖြစ်ရင် လာဘ်ပေးတဲ့ သူကပဲ အနိုင်ရလေ့ ရှိပါတယ်။
အမှုတစ်ခုမှာတော့ ဘုရင်နဲ့အလွန်ရင်းနှီးတဲ့သူတစ်ယောက် မှန်ပါလျက်နဲ့တရားရှုံးသွား ပါတယ်။ အဲဒီ တရားရှုံး သွားတဲ့ ဘုရင့် မိတ်ဆွေက ဘုရင့်ဆီ ပွဲတော်အုပ် လာဆက်ကပ်ပါတယ်။ ဆက်ကပ်ပြီးအမတ်တွေ တရားစီရင်တာ ငွေပေးနိုင်တဲ့သူကို အနိုင်ပေး နေတဲ့အကြောင်း လျှောက်ပြ လိုက်ပါတယ်။
နောက်တစ်နေ့ကျတော့ ဘုရင်လည်း အမတ်တွေ တရားစီရင်တဲ့ နေရာကို သွားကြည့်ပါတယ်။ ဘုရင်ကို မြင်လိုက်တာနဲ့ ပြည်သူ ပြည်သားတွေက ငွေပေးတဲ့သူကို အနိုင်ပေးပြီး အမှုတွေကို မတရား သဖြင့် စီရင်နေတဲ့ အကြောင်းကို ဝိုင်းတိုင် ကြပါတော့တယ်။
ဘုရင်လည်း တရားစီရင်တဲ့ နေရာကနေ ပြန်လာပြီး ပြာသာဒ် ထက်မှာ တရားရှုဖို့ ထိုင်လိုက် ပါတယ်။ ထိုင်လိုက်တာနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ မကျေနပ်တဲ့အသံတွေက ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်နဲ့ ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တရားကို ဆက်ရှုမှတ်လို့ မရတော့ပါဘူး။
ဒီတော့ ဘုရင်လုပ်သူက သံဝေဂ တော်တော် ဖြစ်သွားပါတယ်။ နောက် သံဝေဂနဲ့အတူ “ငါဘုရင်လုပ်နေလို့ ဘာအကျိုးမှ မရှိဘူး။ ရဟန်း တရားကပဲ မြတ်တယ်"လို့ သေချာ သဘောပေါက်ပြီး မင်းအဖြစ်ကို စွန့်ပစ် လိုက်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး ဝိပဿနာ ရှုမှတ်လိုက်တာ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ ဖြစ်သွား ပါတော့တယ်။
မင်းနဲ့ စာဖတ်သူ ၊ စာဖတ်သူနဲ့မင်း။ မင်းနဲ့ စာရေးသူ၊ စာရေးသူနဲ့မင်း တရားသဘောအရ ဆိုရင် ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ ကိုယ့်တရားနဲ့ ကိုယ်ပါ။ သူ့တရားနဲ့ သူပါပဲ။ ကောင်းတဲ့တရားကို အားထုတ်ရင် ကောင်းတဲ့ တရားကို ခံစားရမှာပါ။ မကောင်းတဲ့တရားကို အားထုတ်ရင် မကောင်းတဲ့ တရားကို ခံစားရမှာပါ။ ကိုယ်စွန့်မှ ကိုယ်ရမှာပါ။
ဒါပေမယ့် ဘဝမှာ တစ်ခါတလေ စွန့်ဖို့ခ က်နေ တာလေးတွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ မိသားစု သံယောဇဉ်၊ တစ်သက်လုံး ရှာခဲ့ရတဲ့ အရာတွေ တွေးမိပြန်ရင် ခက်သွားတတ်ပါတယ်။
တရားနဲ့ ယှဉ်လာရင်တော့ စွန့်သင့်တဲ့အချိန်မှာ စွန့်သင့်တဲ့ အရာတွေကို စွန့်ပစ်ရမှာပါပဲ။ အဲဒီ အခါမျိုး မှာတော့ စွန့်ဖို့ ခက်နေရင် "သြော်… ဘုရင် ဖြစ်သူတောင် တရားနဲ့ ယှဉ်လာရင် မင်းအဖြစ် ကိုတောင် စွန့်သေးတာပဲ၊ ငါစွန့်ရမယ့် အရာက ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူးလေ"လို့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး အားယူလို့ ရပါတယ်။ တရားနဲ့ ယှဉ်လာရင်တော့ စွန့်ရမှာပါပဲ။
တရား စခန်း ဝင်ဖို့တောင် မိသားစု သံယောဇဉ်ကြောင့် အိမ်ကို တစ်ပတ် ဆယ်ရက် စွန့်ဖို့ ခက်နေ တတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် "ငါမရှိရင် ဖြစ်ပါ့မလား"ဆိုတဲ့ အတွေးကြောင့်ပါ။
အပဒါန်အဋ္ဌကထာမှာ အကျိုးယုတ်စေတဲ့ နှောင်ဖွဲ့ခြင်းနှစ်မျိုးကို ပြထားပါတယ်။
၁။ " သူဟာ ငါ့ရဲ့ အားကိုးရာပဲ၊ သူမရှိရင် ငါ့မှာ အားကိုးရာမရှိဘူး။ သူရှိမှဖြစ်မယ်"ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို နိမ့်ရာကထားပြီး နှောင်ဖွဲ့ ထားခြင်းတစ်မျိုး။
၂။ "သူတို့ဟာ ငါနဲ့ကင်းပြီး နေလို့မရဘူး။ ငါဟာ သူတို့ရဲ့ အားကိုးရာပဲ"ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို မြင့်ရာကထားပြီး နှောင်ဖွဲ့ခြင်းတစ်မျိုး။
ဒီနှောင်ဖွဲ့ခြင်း နှစ်မျိုးဟာ အကျိုးယုတ်စေတဲ့ နှောင်ဖွဲ့ခြင်းတွေပဲလို့ ဆိုပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှိမ့်ရာက ပဲထားထား၊ မြင့်ရာကပဲ ထားထား နှောင်ဖွဲ့ခြင်းနှစ်မျိုးလုံး ကတော့ မကောင်းတာ အမှန်ပါပဲ။
နှောင်ဖွဲ့ခြင်း နှစ်မျိုးမှာ ကိုယ်က ဘယ်ထဲမှာ ပါနေသလဲ ဆိုတာ ပြန်စိစစ် ကြည့်ရမှာပါ။ နိမ့်ရာကပဲ ပါနေသလား၊ မြင့်ရာကပဲ ပါနေသလား၊ ဘယ်ထဲမှာ ပဲပါပါ နှစ်မျိုးလုံး ကတော့ တစ်ခုမှ မကောင်းပါဘူး။ ဒီနှောင်ဖွဲ့ခြင်းတွေ ကြောင့်ပဲ တစ်ပတ် ဆယ်ရက်တောင် တရားစခန်းဝင်ဖို့ ခက်နေတော့တာပါ။
တကယ် သေချာစဉ်းစားရင် ကိုယ်သေသွားရင်တောင် သူဟာနဲ့သူ ဖြစ်နေမှာပဲ။ သေလည်း သေရဦး မှာပါ။
နောက်တစ်ခုက လူတစ်ဦး တစ်ယောက်ကို ရိုးရိုးအားမကိုးဘဲ နှောင်ဖွဲ့ပြီး အားကိုးတာပါ။ အားကိုး တာကတော့ အားကိုးရမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် နှောင်ဖွဲ့မှု မပါဖို့ပါ။
တကယ်တော့ အားကိုးပြီး တရားရအောင် အားထုတ်ရမှာပါ။ ဒါမှလည်း အားကိုးရတာ တန်တာပါ။ အားကိုး ခံရသူလည်း တန်တာပါ။ နှောင်ဖွဲ့မှု. ပါနေရင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုး မရှိပါဘူး။ သူလည်း တရားနဲ့ဝေး၊ ကိုယ်လည်း တရားနဲ့ဝေး ရတဲ့ဘဝပါ။ ကိုယ့်ဝန်းကျင်မှာ တရားတွေ ရှိနေပါလျက် နဲ့ တရားတွေနဲ့ ဝေးနေရတာတော့ အဓိပ္ပါယ် မရှိလှပါဘူး။ ကိုယ့်ဝန်းကျင်မှာ တရားတွေ မရှိလို့ တရားနဲ့ ဝေးရတာဆို တစ်မျိုးပါ။
တချို့ကျတော့ တရားအတွက် ဆိုပြီး စွန့်ချ ပစ်လိုက်ကြပါတယ်။ တကယ်တမ်း တရား နယ်ပယ်ထဲ ရောက်သွားရော အဆင်မပြေ ဖြစ်ပြီး မူရင်း ဌာနေကိုပဲ ပြန်ရောက်လာသူ တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါက အတိတ်တိတ် ဖြည့်ခဲ့တဲ့ ပါရမီတွေနဲ့လည်း ဆိုင်ပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပါရမီခြင်း မတူပါဘူး။ ပါရမီရှင်တွေလို ယတိပြတ် မစွန့်နိုင်ပေမယ့် နည်းနည်းခြင်းတော့ စွန့်သွားရမှာပါ။
တရားနဲ့ယှဉ်ရင် စွန့်ရမယ် ဆိုပေမယ့် ကလေးမွေး ပြီးပြီးခြင်း ကလေးကို စွန့်ထားခဲ့ပြီ သီလရှင် ဝတ်သွားတာမျိုးကျတော့လည်း အဆင်မပြေ လှပါဘူး။ နို့်တိုက် ဖို့တာဝန်က ရှိပါသေးတယ်။ စွန့်တယ် ဆိုတာ နှောင်ဖွဲ့ခြင်းတွေကို စွန့်ရမှာပါ။ ရာထူး ဌာနန္တရ ငွေကြေး ဥစ္စာ ဇနီးခင်ပွန်း သားသမီး စသည်တွေ အပေါ်မှာ နှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့ နှောင်ဖွဲ့မှုတွေပါ။
ကျေးဇူးတော်ရှင် ယောဆရာတော် ဘုရား အမြဲဟောတာရှိပါတယ်။ ကလေး ငိုတာလည်း တရားပါပဲ၊ ကလေးထိန်းတာလည်း တရားပါပဲတဲ့။ ကိုယ်က မေတ္တာဓာတ်နဲ့ သတိလေးတွေပါနေရင် တရားဖြစ်နေတာပါပဲ။
အားလုံး ကြားဖူးတဲ့ ထေရီကာ ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးလေး တရားရသွားတယ် ဆိုတာ မီးဖိုချောင် ထဲကပဲ တရား ရသွားတာပါ။ ဒီတော့ သတိပါနေရင် ထမင်းချက် တာလည်းတရားပါပဲ၊ ဟင်းချက်တာ လည်းတရားပါပဲ၊ ကော်ဖီ ဖျော်တာလည်း တရားပါပဲ။
ကိုယ့်ဝန်းကျင်မှာ အားကျအတုယူရမယ့်သူတွေအများကြီးရယ်ပါ။ ရဟန်းထဲမှာရော လူထဲမှာရော အများကြီးမှ အများကြီးပါ။ ကိုယ်က သတိမပြုမိလို့ပါ။
တစ်ခါက ဦးဇင်းလေးတစ်ပါး နယ်ကဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကို သွားဖူးပါသတဲ့။ ဆရာတော် ကြီးကို ဖူးတဲ့အချိန်မှာ ဆရာတော်ကြီးက ယောဂီတွေကို တရားစစ်ပေးနေတဲ့ အချိန်ပါ။
ဆရာတော်ကြီးမိန့်တဲ့အထဲမှာ ထူးဆန်းတာတွေပါနေပါသတဲ့။ ဒီတော့ဦးဇင်းလေးက "ဒါတွေဟာ ဘုရားလက်ထက်တုန်းကပဲ ရနိုင်ရှိနိုင်တာ၊ ဒီခေတ်မှာ မရှိနိုင်တော့ပါဘူး၊ ဆရာတော်ကြီး လျှောက်ပြောနေတာ"လို့ စိတ်ထဲက တွေးလိုက်ပါသတဲ့။
ဆရာတော်ကြီးက ချက်ချင်းဆို သလိုပဲ ဦးဇင်းလေး ဘက်လှည့်ပြီး “ဦးဇင်းလေးရဲ့ ကိုယ်မရတာနဲ့ မရနိုင်ဘူး၊ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ မတွေးရဘူး။ မသိဘဲနဲ့ ပြစ်မှားမိရင် အပြစ် ဖြစ်တတ်တယ်”လို့ မိန့်လိုက် ပါသတဲ့။
ဦးဇင်းလေးလည်း တော်တော်လေး ထိတ်လန့်သွားပြီး ဆရာတော်ကြီးကို တောင်းပန်ပြီး ပြန်ခဲ့ပါ သတဲ့။
အဲဒီ ဆရာတော်ကြီးဟာ စာရေးသူရဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းရဲ့ ဆရာတော်ကြီးပါ။ သူငယ်ချင်း ဦးဇင်းကို ဆရာတော်ကြီး ဆီက “နည်းနာနိဿယ ယူထားလိုက်သလား”လို့ မေးကြည့်တော့ “အဲဒီတုန်းက တပည့်တော်တို့က ကိုရင်ငယ်ငယ်ပဲ ရှိသေးတယ်။ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူး၊ ဒါဆရာတော်ကြီး တွေရဲ့ အလုပ်လို့ ထင်ခဲ့တာ။ ဆရာတော်ကြီး သက်တော်ကြီးလာမှ ဆရာတော်ကြီး တရား အဆင့် တစ်ခုတော့ ရနေ လောက်ပြီလို့ ခန့်မှန်းမိတာ”လို့ ပြန်ပြောပြပါတယ်။
ဒီခေတ်မှာ တကယ် ကျင့်ကြံ ပွါးများ အားထုတ်နေတဲ့သူတွေ အများကြီး ရှိနေတာဆိုတော့ မပြစ်မှားမိအောင်နေတာ အကောင်းဆုံး ပါပဲ။ ပြစ်မှားမိလို့ ကိုယ်ပြစ်မှား မိတဲ့သူက အရိယာဖြစ်နေရင် အရိယူပဝါဒကံ ထိုက်သွားပါလိမ့်မယ်။ မစားရ မသောက်ရ ကြီးမားလှတဲ့ အကုသိုလ်ကံကြီးကို ကျူးလွန် မိသွားတာပါ။ ပြစ်မှားတာကတော့ အရိယာကို ပြစ်မှားမှသာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ထက် သီလ သမာဓိကြီးသူကို ပြစ်မှားလည်း အပြစ်ပါပဲ။
စွန့်တဲ့ သူတွေကတော့ စွန့်ပြီး အားထုတ်နေကြတာပါ။ ကိုယ်ပဲမစွန့်နိုင် ဖြစ်နေတာပါ။ စွန့်ခြင်းရဲ့ အကျိုးရလဒ်ကို မသိလို့ မစွန့်နိုင်ကြတာပါ။ ရလဒ်ကို သိတဲ့ သူတွေကတော့ စွန့်နေကြတာပါပဲ။
လောကမှာ စွန့်တဲ့သူတွေက စွန့်ပြီး နှောင်ဖွဲ့တဲ့သူ တွေက နှောင်ဖွဲ့နေကြတာပါ။ ဒီရာထူး ဌာနန္တရ ငွေကြေးဥစ္စာ ဇနီးခင်ပွန်း သားသမီး သက်ရှိ သက်မဲ့တွေကိုပဲ နှောင်ဖွဲ့ ထားကြပါတယ်။ နှောင်ဖွဲ့တော့ မစွန့်လွှတ်နိုင်ဘဲ ဖြစ်နေကြတာပါ။ ဒီတော့ တရားနဲ့ ဝေးသထက် ဝေးနေတော့တာပါ။ တရားနဲ့ ဝေးနေတော့ အမှားအမှန်လည်း မသိတော့ပါဘူး။
တချို့ နှောင်ဖွဲ့မှု. တွေကျတော့ နှောင်ဖွဲ့သူတင် နစ်နာ တာမဟုတ်ပါဘူး။ နှောင်ဖွဲ့သူနဲ့ ဆက်စပ်သူ မှန်သမျှပါ ထိခိုက် နစ်နာ ရတော့တာပါ။
စာရေးသူရော စာဖတ်သူရော စွန့်ချိန်တန်ရင် စွန့်ရမှာပါပဲ။ ဒီလိုပါပဲ စွန့်သင့်တာကို စွန့်ရမှာပါပဲ။ အထူးသဖြင့် တရားနဲ့ ယှဉ်လာရင်တော့ အားလုံး အားလုံးကို စွန့်ရမှာပါပဲ။ မစွန့် နိုင်သေးရင်တောင် စွန့်နိုင်အောင် ကြိုးစားယူရမှာပါ။
တစ်ခါတလေ ပုထုဇဉ် အားလျော်စွာ စွန့်ဖို့ခက်နေရင် ဘုရားအလောင်း စွန့်ခဲ့တာလေးတွေ၊ အထက်က ပစ္စေက ဗုဒ္ဓါလောင်း မင်းစည်းစိမ်ကို စွန့်ခဲ့တာလေးတွေကို အာရုံပြုပြီး "သြော်…. အလောင်းတော်တွေ ပါရမီရှင်တွေဟာ တရားနဲ့ ယှဉ်လာရင် မင်းစည်းစိမ် တောင် စွန့်ကြသေးတာပဲ၊ ငါစွန့်ရမယ့် အရာက သူတို့လောက် မကြီးမားဘူး"လို့ အားကျ အတုယူလို့ရပါတယ်။
မိတ်ဆွေလေးမျိုးရှိတဲ့ အထဲမှာ အတ္ထက္ခာယီ မိတ်ဆွေ ဆိုတာရှိပါတယ်။ မြန်မာလို ပြောရရင် တော့ အကျိုးရှိအောင်ေ ပြာပြတတ်တဲ့ မိတ်ဆွေလို့ ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီ မိတ်ဆွေဖြစ်ဖို့ အင်္ဂါလေးပါးနဲ့ ပြည့်စုံရပါတယ်။ အင်္ဂါလေးပါးဆိုတာက…
၁။ မကောင်းမှု. အကုသိုလ် လုပ်နေရင် တားမြစ်ပြောပြပေးရပါတယ်။
၂။ ကောင်းမှု. ကုသိုလ် လုပ်အောင် တိုက်တွန်း ပြောပြပေးရပါတယ်။
၃။ မကြားဖူးတဲ့ တရားစကားကို ပြောပြပေးရပါတယ်။
၄။ ချမ်းသာ ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ နတ်ပြည်လမ်း၊ မဂ် ဖိုလ် နိဗ္ဗာန် လမ်းကို ညွှန်ကြား ပြောပြ ပေးရပါတယ်။ ဒီလေးမျိုးပါ။
ကိုယ်က ဒီအင်္ဂါ လေးချက်ကို အာရုံပြုပြီး ကိုယ်ချစ်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို တားသင့်တာကို တားပြီး တိုက်တွန်း သင့်တာကို တိုက်တွန်းရမှာပါ။ တရားစကားတွေကို ပြောပြပေးရမှာဖြစ်သလို နတ်ပြည် မဂ်ဖိုလ် ရကြောင်းတွေကိုလည်း ညွှန်ကြား ပြောပြ ပေးရမှာပါပဲ။
ကိုယ်တားတာ တိုက်တွန်း တာတွေကို သူမကြိုက်ပေမယ့် ကိုယ်ချစ်တဲ့သူ ကိုယ့်မိတ်ဆွေ ဆိုးကျိုးမဖြစ်ဖို့ သူကြိုက်ကြိုက် မကြိုက်ကြိုက် တားရ၊ တိုက်တွန်းရမှာပါ။ ဒါမှ အတ္ထက္ခာယီ မိတ်ဆွေ ပီသမှာပါ။
စာရေးသူ စာရေးတဲ့ အခါ နိဗ္ဗာန်ကိုဦးတည်ရုံမကပါဘူး၊ ဒီသဘောလေး တွေကိုလည်း အာရုံပြုပြီး ရေးပို့နေပါတယ်။ တကယ်တော့ စာရေးသူ ကချည်း ရေးပြ ဟောပြ နေရပါတယ်။ စာဖတ်သူ့က ရေးပြ ဟောပြ တာလေးတွေကိုလည်း တလှည့် နာချင်ပါသေးတယ်။
ဒါကြောင့် ဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် Emailနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဟောပြပေးပါဦး။ စာဖတ်သူတွေ ဟောပြတာ လည်း နာချင်လို့ပါ။ ဒါမှလည်း အပြန်အလှန် ညီမျှမှာပေါ့။ ပြီးတော့ စာဖတ်သူတွေက ဆရာတော် မျိုးစုံဆီက နာထား၊ ဖတ်ထားတာရယ် ကိုယ်တွေ့ ဘဝ အတွေ့အကြုံတွေရယ်ကြောင့် ပိုလို့တောင် နာလို့ ကောင်းဦးမှာပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တရားနဲ့ယှဉ်လာရင်တော့ စွန့်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။
Posted by ရာဇာထွေး at 9:18 PM
စံပယ်ချို January 7, 2013 at 11:38 PM
"ငါမရှိရင် ဖြစ်ပါ့မလား"လို့တော့မတွေးဖူးပဲ (ငါမရှိရင်အေးရော)လို့မကြာခဏတွေးဖူးတယ်
ငါဆိုတဲ့ငါကလဲ မသက်ပြင်းလို့ခေါ်ရလောက်အောင်သေမင်းတံခါးက အကြိမ်းများစွာလွှတ်လာပြန်တယ်.....
ကိုယ်တိုင်ဆိုရင်တော့ ဒါတွေဖတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး ခုတော့ကိုရာဇာကျေးဇူးကြောင့် သိခဲ့ရတယ်
မိုးနတ်ကြယ်စင် January 8, 2013 at 8:08 PM
ဝီရဓမ္မ( Brave The Dhamma) January 11, 2013 at 11:43 PM
Ma Tint February 20, 2013 at 9:37 PM